Iindlela eziphambili ze-Astronomy ze-Digital Devices
Kwiintsuku ezindala zokuqhafaza, ngaphambi kokuba iifowuni kunye namacwecwe kunye neekhompyutha zekhompyutha zazikho, izazi zeenkwenkwezi zithembele kwiitshathi zeenkwenkwezi kunye neenqwelulwazi zokufumana izinto esibhakabhakeni. Ngokuqinisekileyo, kwafuneka ukuba bakhokhele iitelesiko zabo kwaye, kwezinye iimeko, zithembele nje kwi-iso elide ukuze zijonge isibhakabhaka ebusuku. Ngokuguqulwa kwedijithali, izixhobo abantu abazisebenzisayo zokuhamba, ukunxibelelana, kunye nemfundo zijoliswe kwiinjongo zeenkwenkwezi kunye neenkqubo zeenkwenkwezi. Ezi zifikeleleke ngokukongeza kwiincwadi zeenkwenkwezi kunye nezinye iimveliso.
Kukho ezininzi iinkqubo ezifanelekileyo ze-astronomy ngaphandle apho, kunye neeprogram ezivela kwiintlobo ezininzi zee-mission ezinkulu. Ngamnye uhambisa umxholo osesikweni kumntu onentshisekelo kwimisebenzi eyahlukeneyo. Enoba umntu uyena-stargazer okanye nje unomdla kwizinto eziqhubekayo "phezulu", aba ncedisi bezedijithali bavula i-cosmos ekuhloliseni ngabanye.
Uninzi lwale nkqubo kunye neeprogram zikhululekile okanye zinokuthengwa kwangaphakathi nooncedo ukuze zisebenzise abasebenzisi ukuba balungise amava abo. Kuzo zonke iimeko, ezi nkqubo zinikeza ukufikelela kwiinkcukacha ze-cosmic zakuqala izazi zeenkwenkwezi zingaphupha kuphela ukufikelela. Ukusebenzisa abasebenzisi befowuni, ii-apps zinikeza ukuphatheka okukhulu, ukuvumela abasebenzisi ukuba bafikelele kwiinkwenkwezi zekhompyutha kwintsimi.
Njani i-Digital Astronomy Assistants Work
Uninzi lwezintlu kunye nezinye iinkqubo zesayensi yeenkwenkwezi zinezicwangciso ezivumela umsebenzisi ukuba azilungiselele indawo kunye nexesha. UCarolyn Collins Petersen nge-StarMap 2
Izicelo zefowuni kunye nedeskithophu zineenkcukacha eziphambili zokubonisa ababukeli besibhakabhaka ebusuku kwindawo ephawulwe emhlabeni. Ekubeni iikhomputha kunye nee-mobiles zinokufikelela kwixesha, umhla kunye nolwazi lwendawo (ngokuqhelekileyo nge-GPS), iinkqubo kunye neefowuni ziyazi ukuba ziphi, kwaye kwimeko ye-app kwi-smartphone, isebenzisa ikhampasi yefowuni ukuze ikwazi ukuba ikhontshilephi. Ukusebenzisa iinkcukacha zeenkwenkwezi, amaplanethi, kunye nezinto ezinzulu-bhakabhaka, kunye nekhowudi yokudala i-chati, ezi nkqubo zinokuhambisa isatifiketi echanekileyo yedijithali. Yonke into eyenziwa ngumsebenzisi ukujonga kwitshathi ukuze ukwazi ukuba yintoni esibhakabhakeni.
Iitshathi zeenkwenkwezi ze-Digital zibonisa isikhundla sendawo, kodwa kwakhona zihambisa ulwazi malunga nento ngokwazo (ubukhulu bayo, uhlobo lwayo, kunye nomgama.) Ezinye iinkqubo zinokuthi zichaze inkcazo yeenkwenkwezi (oko kukuthi, luhlobo luni lweenkwenkwezi), kwaye luyakwenza Ukunyakaza okubonakalayo kwamaplanethi, i-Sun, iinyanga, ii-comets, kunye ne-asteroids esibhakabhakeni ngaphezu kwexesha.
Iiprogram ze-astronomy ezikhuthaziweyo
Isampula isikrini kwi-iOS-based based astronomy app Starmap 2. UCarolyn Collins Petersen
Ukukhangela ngokukhawuleza kwezixhobo ze-app kubonisa ubuncwane bee-astronomy zokusebenza ezisebenza kakuhle kuma-smartphones nakwiipilisi. Kukho neenkqubo ezininzi ezenza ekhaya kwi desktop kunye neekhomputha. Zininzi zezi mveliso zingasetyenziselwa ukulawula i-telescope, ezenza ukuba ziboneleleke ngokubalulekayo kubabukeli bezulu. Phantse zonke iiprogram kunye neenkqubo zilula kakhulu kubaqalayo ukuba ziqoke kwaye zivumele abantu ukuba bafunde i-astronomy ngesiqu sabo.
Iinkqubo ezifana ne-StarMap 2 zinemithombo eninzi efumanekayo kwiinkwenkwezi zeenkwenkwezi, kwikhompyutheni yamahhala. Ukwenza izinto eziqhelekileyo kubandakanywa ukongezelela iinkcukacha ezintsha, ulawulo lwe-telescope, kunye neengqungquthela ezahlukeneyo zezifundo zabaqalayo. Itholakala kubasebenzisi abanezixhobo ze-iOS.
Omnye, othiwa yi-Sky Map, uyintandokazi phakathi kwabasebenzisi be-Android kwaye akhululeki. Ukuchazwa nje ngokuthi "iplanethiyamu egcinwe ngesandla kwisistim sakho" inceda abasebenzisi ukuchonga iinkwenkwezi, amaplanethi, i-nebulae, kunye nokunye.
Kukho neenkqubo ezifumanekayo kubasebenzisi abancinci abasebenzela iteknoloji abavumela ukuba bahlolisise isibhakabhaka ngesantya sabo. I-Night Sky ijolise kubantwana abesibhozo ubudala nangaphezulu kwaye ixutywe ezininzi zeenkcukacha ezifanayo njenge-high-end or more complex apps. Itholakala kumadivayisi e-iOS.
I-Starwalk ineenguqulelo ezimbini ze-astro-app eyaziwayo, enye ejoliswe ngqo kwiintsana. Ibizwa ngokuba yi "Star Walk Kids," kwaye iyafumaneka kwiidivayisi zombini ze-iOS kunye ne-Android. Kubantu abadala, inkampani nayo ine-app tracker ye-satel kunye nenkqubo yokuhlola i-solar system.
Iiprogram ze-Agent Space
Ikhutshulwa yesikrini seNASA njengokuba ivela kwi-iPad. Insiza ivela kwiinambuzi ezahlukeneyo. NASA
Ewe, kukho ngaphezu kweenkwenkwezi, amaplanethi, kunye nemilalane ngaphandle. I-Stargazers ngokukhawuleza ziqhelana nezinye izinto zezulu, ezifana nezi-satellites. Ukwazi ukuba i-International Space Station ngenxa yokudlulela phambili inikezela umbonisi ithuba lokucwangcisa phambili ukuze abambe ingcamango. Yilapho insiza yeNASA ihamba ngokufanelekileyo. Ifumaneka kwiindidi ezahlukahlukeneyo, ibonisa umxholo we-NASA kwaye inikezela ngokulandelela i-satellite, umxholo kunye nokunye.
I-European Space Agency (i-ESA) iqulethe iifayili ezifanayo, ngokunjalo.
Iimpawu eziphambili ze-Desktographic astronomers
Isampuli isatifiketi esuka kwiStellarium, ipakethi ye-software ekhethiweyo yenkwenkwezi evulekile kunye nevulekile. UCarolyn Collins Petersen
Awuyi kuvela ngaphandle, abaphuhlisi baye badala ezininzi iinkqubo zee desktop kunye neekhompyutheni. Le nto ingaba yinto elula njengokushicilelwa kwitshathi yenkwenkwezi okanye njengeyinkimbinkimbi njengoko usebenzisa inkqubo kunye nekhompyutha ukuba isebenzise i-home observatory. Enye yeeprogram eyaziwayo nakakhulu kunye neStellarium. Umthombo ovulekileyo kwaye kulula ukuyihlaziya kunye neenkcukacha zoluntu kunye nezinye izithuthuthu. Abaninzi ababukeleyo basebenzisa iCartes du Ciel, inkqubo yokwenza isatifiketi ekhululekile ukukhuphela nokuyisebenzisa.
Ezinye zeenkqubo ezinamandla kakhulu kwaye zifikeleleke zikhululekile kodwa ngokuqinisekileyo zifanelekile ukukhangela, ngokukodwa ngabasebenzisi abanomdla ekusebenziseni iinkqubo kunye neenkqubo zokulawula iziganeko zabo. Ezi ziquka i-TheSky, engasetyenziselwa njengenkqubo yokutshatyalaliswa yedwa, okanye umlawuli we-pro-grade mount. Omnye kuthiwa yi StarryNight. Iza kuluhlu oluthile, kubandakanywa nolunye ulawulo lwe-telescope kunye nolunye lwabaqalayo kunye nokufundisisa eklasini.
Umfanekiso weskrini we-Sky-Map.org indawo yokuhlola i-astronomy. Sky-Map.org
Amanqaku asekelwe kwisiphequluli anokufumana ukufikelela okuthabathayo esibhakabhakeni. I-Sky-Imephu (ukuba ingadideki kunye ne-app apha ngasentla), unikezela abasebenzisi ithuba lokuba bahlolisise ihlabathi ngokulula kwaye bacinge. I-Google Earth nayo inemveliso ekhululekile, ebizwa ngokuba yiGoogle Sky eyenza into efanayo, ngokukhululeka kweendlela abasebenzisa iGoogle Earth abazi ngayo.
ImiSebenzi yokuHlola iNgqungquthela ngamashumi eminyaka
Hubble kunye neGuant Bubbles of Gas
Inkcazo kunye nemizekelo yeDiazeugma